Indlela yokulawula i-Amazon search results?
Ukulawula iziphumo zophando ze-Amazon ngenye yeephupha ezinkulu kakhulu zabathengisi be-intanethi. Uhlu lokuqala lwephepha lunokugqiba ukuba ngaba sithengisa izinto ezingu-30 + ngosuku okanye izinto ezi-1 ukuya kwezi-5 ngosuku. Kukho ezinye ezininzi izizathu zokuba kutheni kubalulekile ukulawula iziphumo zophando ze-Amazon. Zibandakanya ukukhuthaza ukuthengisa, i-Amazon ithenge ukufumana ibhokisi, ukuphuculwa kolwazi, kunye njalo njalo.
Ukulawula ikhasi lekhasi le-Amazon, kufuneka udlulisele phambili abakhuphiswano bakho kwaye udale umfanekiso wesimo esihle. Udinga ukwazi imigaqo ethile yegolide kunye nobuchule obuqilileyo bokucwangcisa ukuba ube kwi-TOP. Ngaphezu koko, kufuneka uhlale uzibuza "Yintoni ama-Amazon ayifunayo nantoni na?" Kwaye ugcine umfuno wakho kumthengi kwaye uyayinqwenela engqondweni. Ungazami ukwenza umdlalo kule nkqubo njengoko uza kugqiba ngeendawo ezilahlekileyo.
Kulo nqaku, siza kuxubusha kuphela iindlela ezisemthethweni zokunyusa iimveliso zakho ze-Amazon ukuya kwi-TOP yempembelelo yosesho. Ngoko, masiqhubeke.
Iindlela ezikhohlisayo zokulawula iziphumo zophando ze-Amazon
isitorethi kukuba ivelisa izinto ezixabisekileyo kwaye zizise ixabiso langempela kubaxumi babo. Ukugcina engqondweni iimfuno zabathengi kunye nokubonelela ngamava amahle kukuba yi-golden rule yama-Amazon athengisa kakhulu. Yingakho kufuneka uqinisekise ukuba iimveliso ozithengisayo okanye uceba ukuzithengisa ziphezulu. Abaphandi bama-Amazon kufuneka banikezwe ngamava amanqaku angcono kumakhasimende njengento eyona nto ibaluleke kakhulu ekuhlunguleni iimveliso ezingcono kwixabiso elifanelekileyo. Unyaka ngamnye i-Amazon ifumana iiligidi ezigidi zeedola kubathengi abathengi kule ndawo yokuthengisa. Yingakho abathengi belawula i-Amazon e-commerce market market rules. Ngoko, ukuba uthengisa into esemgangathweni, injongo ephambili yeAngesi kukususa iimveliso zakho kwi-SERP. Kwaye ekugqibeleni, kufuneka uqaphele ukuba ukuba uthengisa izinto ezincinci, akukho naziphi izinto eziza kusebenzela zona.
Ukuthengisa okungakumbi kuthetha ukuthatha indawo ephezulu kwi-Akhawunti yee-Amazon. Ngokutsho kwe-Amazon usetyenziso lwe-algorithm, zonke iimveliso kunye nomthamo ophezulu wokuthengisa kufuneka zifakwe kwi-TOP njengoko ziyakuthi zivelise imali engaphezulu kwi-Amazon. I-Amazon Sales Rank isebenza njengesalathisi sezempilo esiyintloko kwaye idlala indima efanayo ne-PageRank ku-Google. Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhankanya ukuba ireyithi yokuthengisa ayisoloko ihambelana namazwi angundoqo asetshenziselwa ukuphanda. Igcina kuphela umthamo wokuthengisa wecandelo lomkhiqizo.
Kufuneka uqonde ukuba ukunyusa ukuthengisa kuyisimo sengqondo, kodwa kungekhona umgomo wokugqibela we-Amazon. Njengomthengi oza kuba ngumxhasi, kufuneka ucinge ixesha elide apha kwaye ujonge amathuba okufumana izithuthi ezijoliswe kuyo ngaphandle kwemithombo efana ne-Google, iBing kunye nezonxibelelwano zentlalo kunye namanye amaqonga e-ecommerce. Kuya kukunceda ukuba ube nezinga eliphakamileyo kunabakwi-competitive niche.